Banyere Anyị - Tianjin Shengxin Sports ngwongwo Co., Ltd
Tianjin Shengxin Sports ngwongwo Co., Ltd e guzobere na 2011, nke a na-pụrụ iche na-emebe na iwu sports venues, na n'ichepụta n'èzí mma ngwa, onu football ubi, multi-nzube ama egwuregwu, ya n'ụlọ egwuregwu ngwa, na-akụziri ngwaọrụ, basketball guzoro, volleyball post, badminton post, tennis post, n'èzí na-echebe ntupu na mwepu belt. Anyị nwekwara ike Nlụpụta nile di iche iche nke na-abụghị ọkọlọtọ ngwa dị ka ndị ahịa 'arịrịọ. Ugbu a Shengxin siworo otu nke China Sporting ngwongwo Federation (CSGF), China agụmakwụkwọ & Sporting ngwongwo Association (CSSGA), China Educational Equipment Industry Association (CEEIA), Tianjin Sporting Industry Association (TSIA), na kwa director unit nke School Sporting Equipment Alaka Association na CEEIA na Sporting Equipment Professional Committee na TSIA. General Manager Zhang Junyuan a họọrọ dị ka ndị guzo director nke TSIA.
Mgbe 7 afọ na-emepe emepe, Shengxin Sports siworo akpa ụlọ ọrụ na Chinese mma akụrụngwa Mmeputa. Ugbu a, anyị ike na factory ebe bụ nke mbụ ọnọdụ China. Mmepụta ngwá akpaaka bụ na-eduga larịị na njem. Ugbu a, anyị bụ otu n'ime ndị Top 10 ụlọ ọrụ nke inweta NSCC akwụkwọ na na-eduga larịị ke Tianjin. Ugbu a, anyị NSCC ngwaahịa nwere ihe karịrị 100 iche iche nke di na upstream ozo na 40 NSCC akwụkwọ ụlọ ọrụ
The ngwa mmepe nke ngwaahịa ihe egwuregwu ụlọ ọrụ na-enye ohere maka Shengxin Sports. Anyị ahịa ego na 2017 kemgbe ihe karịrị 100 nde RMB. Anyị ụlọ ọrụ zubere mee ngwangwa ụlọ ọrụ okirikiri nhọrọ ukwuu, ịgbatị ngwaahịa usoro na n'ụzọ dịkwuo ahịa ego na 2018-2020.
Anyị dechara na 2018:
1.Level elu mmepụta akara, mmepụta ebe 20,000 square mita. The ike nwere ike iru 180.000 iberibe, mmepụta uru 180 nde RMB.
2.New wuru ime ụlọ mma ngwa mmepụta osisi nwere ike iru 60 nde mmepụta uru n'afọ mbụ.
3. itinye ego 3 nde RMB kwa afọ iji na-arụkọ ọrụ na elu Taiwan Rd otu maka ịzụlite ọhụrụ usoro ime ụlọ na n'èzí mma mmepụta, nke ukwu-ewusi ụlọ ọrụ nwere ikike nke emebe, n'ichepụta na innovating.
4.Built na n'elu 20 mmadụ mgbe-sales ọrụ otu egwuregwu ka distributers free si nchegbu na ndị ahịa itukwasi.
5.Introduced zuru akpaka isii axis ịgbado ọkụ ígwè ọrụ nke pụrụ ịmata 360 ogo ịgbado ọkụ enweghị nwụrụ anwụ n'akuku na akpaka mgbanwe. The akpaaka nwere ike iru 100%. Anyị na-ẹkenam elu akụrụngwa dị ka ihe pụrụ iche akpaka agafe abụọ-rails spraying na eserese eruba akara, space akara anwụrụ ọnwụ igwe, space akara anwụrụ ekwe igwe na na. All ndị a elu ngwá doro anya na mma ngwaahịa àgwà na mmepụta arụmọrụ ma belata mmepụta na-eri.
Ugbu a anyị ngụkọta ego bụ 125 nde RMB (adịghị na-agụnye ụwa na ogbako ụlọ). The ofu input bụ 60 nde RMB, na nke ugbu a isi obodo bụ 65 nde RMB.
Na ndị na-esonụ afọ, apụ, anyị chọrọ ịzụlite nwere ọgụgụ isi ngwaahịa site na-eme nnyocha ma ọ bụ na-ewebata. Ọ bụghị nanị na ogide nnukwu zuo ahịa, ma na-na-na nkịtị ahịa na-akpali ma na-aga n'ime nkịtị ezinụlọ. Nke abuo, anyị chọrọ iso na-ekere òkè na aku na uba na ọtụtụ na miri ịkekọrịta bonus nke mba mma iwu. Olileanya na inupụ ndị Internet, ígwé ojii Mgbakọ, nnukwu data, na Internet nke ihe na mba na-agbatị na-emepe emepe ọnụ, ka technology aka mba mma.
Anyị afọ atọ atụmatụ bụ ka bellows:
2018, ahịa ego 180 nde RMB, uru 30 nde RMB;
2019, ahịa ego 300 nde RMB, uru 50 nde RMB;
2020, ahịa ego 500 nde RMB, uru 100 nde RMB.
Anyị ga-adị na-eduga larịị mgbe ọbọ lekwasịrị!
Na September 2017, Shengxin Sports ebere ye Tianjin Youfa Steel Pipe Group, nke bụ otu n'ime "Top 500 Chinese Enterprises" ihe karịrị afọ 12, na-ewu ọhụrụ Shengxin Sports ọnụ. The imekọ ihe ọnụ mma na ụlọ ọrụ ọhụrụ factory ewu, ọhụrụ ngwá mmeghe na ọhụrụ ngwaahịa mmepe.